३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार १५:०५ PM
अमेरिकामा एकैदिन ४० हजार संक्रमित
१३ असार २०७७, शनिबार १३:२१ मा प्रकाशित
२०७७ असार १३ शनिबार, एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकामा विगत २४ घण्टामा ४०,००० भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संम्रमण पुष्टि भएको छ । फ्लोरिडा राज्यमा मात्रै झन्डै ९,००० नयाँ संक्रमित थपिएका छन् जुन संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा ६२ प्रतिशतले बढी हो । कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्यामा वृद्धि देखिएसँगै फ्लोरिडा र टेक्सस दुवै राज्यले फेरि प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् ।
अमेरिकाले गम्भीर समस्याको सामना गरिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी सरकारका एक प्रमुख सल्लाहकार डा. एन्थोनी फाउसीले बताएका छन्। दुई महिनायता ह्वाइट हाउस टास्क फोर्सको पहिलो ब्रीफिङमा बोल्दै उनले भने, ‘त्यसलाई अन्त्य गराउने एक मात्र उपाय भनेको हामी सबै मिलेर अन्त्य गराउने हो।’
डा. फाउसीले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने क्रमलाई रोक्न नसकिए राम्रो गरिरहेका देशका अन्य भाग पनि अब प्रभावित हुनसक्ने बताए। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले पनि १६ वटा दक्षिणी राज्यहरूमा संक्रमण बढ्दै गएको स्वीकारेका छन् । तर भाइरस फैलिने क्रमलाई अमेरिकाले सफलतापूर्वक मन्द बनाइदिएको उनको दाबी छ। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार शुक्रवार थप ४०,१७३ व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो ।
अमेरिकामा हालसम्म २४ लाख व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने देशभरि १,२५,००० भन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमित र त्यसबाट मृत्यु हुने संख्याको हिसाबले अमेरिका विश्वमै पहिलो स्थानमा छ। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार देशमा संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या अहिले भनिँदै आएकोभन्दा कैयौँ गुना बढी हुनसक्छ ।
बिहीबार सेन्टर्स फर डिजीजेज कन्ट्रोल (सीडीसी)ले संक्रमितको वास्तविक संख्या अहिले पुष्टि भएका संक्रमणभन्दा दशगुना बढी हुनसक्ने बताएको थियो ।
आगामी अक्टोबर महिनासम्ममा १,८०,००० व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने वाशिङ्टन विश्वविद्यालयको अनुमान छ । तर ९५ प्रतिशत अमेरिकीहरूले मास्क लगाए त्यो संख्या १,४६,००० मात्र हुने उसको भनाइ छ।